Dagaal mar kale ku dhexmary gobalka Gedo ciidamada huwanta iyo Al-Shabaab
Gedo:-Wararka naga soo gaaraya gobalka Gedo ayaa sheegaya in maanta mar kale dagaal culus uu ku dhexmaray ciidamada DFS oo kaashanaya kuwa Itoobiya iyo Al-Shabaab waxaana uu dagaalka xoogiisa uu ka dhacay inta u dhaxeysa degaanada Rays-Qode iyo May-Kaareebe oo ka tirsan Degmada Garbahaarrey .
Dagaalka ayaa waxaa uu ahaa mid culus oo ay labada dhinac isku weydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana uu dagaalku qarxay markii ciidamada Al-Shabaab ay waddada u galeen ciidamada huwanta oo marayey duleedka Degmada Garbaahaarrey.
Warar hordhac ah oo laga helayo gobalka Gedo ayaa sheegaya in dagaalka uu sababay khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac kala duwan waxaana si rasmi ah loo ogeyn tirada rasmiga ah ee ku dhimatay dagaalka saaka .
Afhayeenka Ururka la baxay Ahlu Suna ee gobolka Gedo oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in dagaalka maanta ay soo qaadeen Ururka Al-Shabaab ayna iska difaaceen .
Dhanka kale wararka laga helayo gobalka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo Itoobiyaan ah ay shalay ka soo talaabeen Degmada Luuq ee gobalka Gedo iyaga oo ay la socdaan ciidamo ka tirsan DFS kuwaas oo lagu soo tababaray Degmada Doolow .
Saraakiil ka tirsan DFS oo ku sugan gobalka Gedo ayaa ku goodiyey in ay labada degmo oo ay haatan ka heystaan gobalka Gedo Al-Shabaab (Degmada Baardheere iyo Buurdhuubo) ay dib u qabsan doonaan halka ay Al-Shabaab weeraro joogto ah ku hayaan Degmooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada huwanta.